ME RAZAFIMANANTSOA : HANITRINIAINA MIHOSO-DRA NY TANAN-DRAJOELINA – MyDago.com aime Madagascar
ME RAZAFIMANANTSOA : HANITRINIAINA MIHOSO-DRA NY TANAN-DRAJOELINA
Mahatsiaro sady malahelo ny 26 janoary 2009 isika hoy ny Me Razafimanantsoa Hanitriniaina teny amin’ny Magro Behoririka androany satria mbola vaky ny fo. Ry zareo hoy izy milaza fa tsy mbola mikatona ny fery ary isika kosa miteny fa tsy mbola sitrana ny fery. Ny 26 janoary dia mahatsiaro isika hoy ity olomboatendry ity fa rahona mainty be teto amin’ny tànana, loto tsy loto ary ohatry ny vitsika mitangorona amin’ny zavatra efa maty iray ny olona teny Tanjombato. Tsaroako tsara hoy izy fa namonjy fivoriana tany Afrika ny filoha Ravalomanana Marc tamin’io ary nody haingana fa nisy zavatra teto. Teny Ivato teny hoy Me Hanitra dia efa nahitana olona hafahafa be dia be. Nisy nitoraka ny fiaran’ny filoha sy ny kortezy niaraka tamin’ny ary ny tenako hoy izy tao anatin’izany. Nanana fiara izahay napetraka tao amin’ny Rnm ary tokony tamin’ny 10 ora alina avy nametraka fiara tao izahay no nahita olona be dia be tamin’iny faritra iny. Nilaza ilaikely hoy ity mpanao politika ity fa ho eny amin’ny fitsarana fa nisy namany nigadra tao. Ny tenako hoy izy dia tao amin’ny fitsarana. Nisy niantso ny tenako hoy izy hoe miala tao ianao fa misy andian’olona lasa any. Dimy minitra taorian’izay anefa dia efa nisy olona marobe teo amin’ny Rnm. Nisy ny mpitandro filaminana niaro ny Rnm hoy izy saingy ilay olona nihanika fefy dia tsy tompon’ny tenany ary avy eo dia nisy andian’olona faharoa tokony ho 200 eo ho eo niditra indray. Tao anatin’ny sengotra vitsy no nandoran’ireo olona ireo ny Rnm ary ny fiara izay nipetraka tao dia nalain’izy ireo avokoa ny kojakoja rehetra ary avy eo nodorany. Ny nampalahelo hoy Me Hanitra dia nisy olona nanana fiara nipetraka roa tao amin’ny Rnm izay nidonam-pahoriana ka ny iray may tao satria tsy nanampo ilay olona. Izany rehetra izany dia tsy fanadino. Nisy olona naome baiko hoy izy tao ary hita teo ny fiarany. Mbola misy miriorio any lavitra any amin’izao fotoana izao. Misy aza hoy izy nifanena tamiko teo Ampefiloha tamin’io fotoana io ary Cst izy izao. Niala ny olona rehetra hoy Me Hanitra dia tonga ny ben’ny tànana tamin’izany ka rehefa tonga teo akaikin’ny Cenam dia nilaza fa omeko tso-drano ianareo fa izaho hiverina. Nisy ny tso-drano hoy izy nomeny teto ary tomponandraikitra amin’ny zavamisy teto ilaikely. Ireo olona victime rehetra, indrindra ny olona novonoina hoy Me Hanitra ary ireo sary dia porofo fa mihoson-drà ny tanany. Heloka be vava ary crime izany amin’ny lalàna dikan’izany hoy izy dia azontsika toriana foana izy hatramin’ny 2019. Avelao hilatsaka izay hilatsaka fa tsy maintsy miala eo ireo amin’ny fitsarana ireo. Ny Sadc hoy ity mpisolovava ity nilaza hoe omena aministia Rajoelina, ny filoha Ravalomanana Marc, ny miaramila. Izy no mila amnistia fa tsy ny filoha Ravalomanana Marc. Efa misy ny fitoriana nataontsika hoy izy ary ho hitan’ny Havana eo ireo. Natao milamina tsara ny antsika hoy izy ka izay no nampikoropaka azy. Ny sehatra iraisma-pirenena no nilaza taminy ka izay izy vao nilaza hoe omeo amnistia. Izy tenany hoy Me Hanitra mbola tsy nilaza hoe omena amnistia fa ireo namany. Isika hoy izy mbola miandry na amin’ny 2019 aza fa mbola betsaka ny olona tsy hita tamin’ireny. Tsytokony ho adinointsika ireny zavatra ireny. Mbola manana porofo any ho any isika hoy izy ary misy olona akaiky azy efa nifona amiko. Ny tenako hoy Me Hanitra dia nilaza tamin’io olona io fa ampitaiko any amin’ny filoha Ravalomanana Marc izany fifonanao izany. Ho antsika tsy mampaninona na omeny amnistia na tsia fa isika tsy angataka amnistia ho an’ny filoha Ravalomanana Marc raha iny lalàna nataonareo iny. Raha iny an’ny Sadc iny kosa hoy Me Hanitra dia zavatra hafa iny, fa rehefa miteny ny Sadc hoe omena dia omena. Mazava ny tondrozotra fa vita daholo ny amnistia vao miroso amin’ny fifidianana isika. Ny olona tokony omena izany anefa tsy mbola vita, ny loi d’amnistia nataon’ny Sadc no tadiavina. Ny andininy faha 20 hoy tsy maintsy tanterahina. Ny filoha Ravalomanana Marc efa nilaza fa mody izy aloha vao manendry olona hisolo azy. Misy olona any hoy Me Hanitra mamendrofendro antsika hoe ahoana izany ianareo rehetra ireo. Ny antsika dia miandry an’I dada. Raha ny tokony ho izy dia ny 08 febroary izao no tokony handeha ny fiantsoana ny olona hifidy sy fametrahana ny antotaratsy. Dikan’izany hoy izy dia mila ny filoha Ravalomanana Marc hody haingana eto isika. Raha an-terisetra tahaka ny fifidianana tamin’ny 2010 io dia tsy misy dikany. Rehefa tsy tonga eto I dada dia tsy misy dikany izany. Ny zanak’I Dada hoy Me Hanitra dia tsy hanendry tena na hanolotra kandida raha tsy tonga ny filoha Ravalomanana Marc. Manana zo hifidy ny tsirairay ary ny dadanay dia manana zo ihany koa. Mbola misy fifandresehan-dahatra hoy izy rehefa tonga izy.
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 janvier 2013 26 janvier 2013 Catégories Politique
10 réflexions sur « ME RAZAFIMANANTSOA : HANITRINIAINA MIHOSO-DRA NY TANAN-DRAJOELINA »
DIA VOAMAIKA FALY IREO TSY VALAHARA RAHA TSY HANENDRY OLONA HO FANTAM-BAHOAKA IANREO; IREO VAOKA IZAY HIFIDY NY FILOHA RAVALOMANANA:
Inona ihany ity resaka amnistie ity E1 Dia ilefitra amin´izany ve ianareo mpitarika ny mouvance ravalomanana? Efa hoe, tsy mila amnistie i DADA , dia hanaiky ve isika fa omena amnistie Rajoelina izay tokny ho tsaraina sy tapahan-tenda mihitsy fa sad jiolahy no mpamono olona no mpanongam-panjakana, nataony daholo ny eloka mahafaty rehetra.
Amiko ny amnistie dia ho an´ireo miaramila sy olon-tsotra nogadraina noho ny tsy rariny, noho izao politika maloto ataon-dRajoelina mianakavy izao.
Matoky ve ianareo fa tafaverina haingana i DADA ? nefa hainareo fa ny frantsay mahery , izay tiany hatao toa tanteraka, tao ny Tondrozotra heviny io tantetraka, io ny ni…ni ,io fa tanteraka, dia io indray ilay hoe tsy mody alohan´ny fifidianana. mampanahy ihany fa fetsy loatra ary mividy olona maro ny franttsay. Ka sao mihesona isika.
tariho ny olona hivoaka ary miantsoa olona maro hanao sitting ,ampy izay. aiiza ilay ranamana teto ilay hoe inspecteur nafanafo teto, aiza izy tsy nitarika fa miandry ny vahoaka leo rom-poza.
Avoahay ny gadra politika, , sokafy aloha ny haino aman-jery nikatona, entina hampahafantarana ny vahoka ny tena zava-misy eto amin´ny firenena, ilaina ireo mba hifandanja ny fifampihelezan-kevitra atao, raha tsy izany ho fifidianana karakarain´mny foza ary ho lalaovin´ny foza no hisy dia vasoka eo indray isika mianakavyy miaraka amin´i DADA:
Mila vonjy i madagasikara sy ny vahoaka fa i rajoelina efa nanaparitaka basy marobe novidiany tamin´ny anglisy sy ny maorisianina. fottry ny fanafihana atsy sy aroa.
DIA @2019 INDRAY IZANY RI HANITRA,maninona raha hajanona kely itymagro ity dia mioverina @ 2018 any ho any .
AOKA IZAY NY RESABE.
DIA DIPLOMATIA INONA INDRAY NO TIANAREO HO LAZAINA R I HANITRA ? ZARANAREO AZA MITENY DIRECT I GODBLATT
KA HANJARANAREO MBA MITENY MARINA ,na manao izay hanoherana izay voalazany izay .
IZAY NO HEVITRY I HOLLANDE RAHA NIAONA T@ PRESIDENT N I TANZANIA IZY –
dia inona nop hatanao ,handrebireby vahoaka eo fa mandainga i ambassadera ?
AOKA HOY NY RESA BE .
MILA HETSIKA MAFANA ITY .
Mazava tsara ny fanambarana ary ny fitantarana ny seho-javatra itany sy nalainy sary sary..Ary isaoranabe azt izany..
Na vazivazy na hanihay dia hajao ny fahafahan’ny sasany mivory sy milaza ny heviny…
Avelao MACRO fa aza kitikitiana na esoesoana..Toa an’ireo mitakotitsika amin’ny tranokala ireo olona mivory eny..dia manan-kolazaina ary milaza tokoa ny tiana ho lazaina toa ireo mitendry clavier!
Fahafahana mivory sy milazany heviny ny sehatra MAGRO , koa tandremo ny teny tsiambina
27 janvier 2013 à 12 h 28 min
Raha ny andron’ny 26 janoary aloha dia hita fa fahombiazana ny tsao @ MAGRO. ary ena maniry mafy i=aho mba ho fahombiazana hatrany. Fahobiazana satria mba tonga ny olona, ary indrindra napetraka tany ively ireo sary ho hitan’ny mpandalo. Ny hetsika toy izany no tokony hamafisina rehefa tsy sahy hivoaka ihany. Izaho ary mihevitra hoe apetraka any ivelany MAGRO mihitsy ilay fanamafisam-peo dia @ izao maheno daholo ny olona any ivelany… Somary avo loatra anefa ny fipetrak’ilay sary ka soamy manahirana ny mijery. Ny indro manaraka koa dia ity fivavahana lava ity, raha hapetraka any ivelany mantsy ny fanamafisam-peo dia tsy vaovao politika intsony no henony fa toa resaka soratra masina dia tsy handaitra izany.
Mazava loatra fa mila hapiana ny MAGRO fa tsy kianina fotsiny. Raha mba nmisy afaka nanao sary sy exposition tsara kokoa ho@ 7 fevrier ohatra. Sary lehibe, soratra mazava, ary any @ rindrindra ivelan’ny Magro… dia tena efa zava-dehibe.
Farany, hoan’i Dr Celestin, tsy ny vahaokan;ny MAGRO no voakina fa ireo mpitarika vilam-bava ihany sady manakana ny vahioaka tsy hihetsika.
Ho antsira rehetra manoratra eto, fantaro fa ny vahoaka no tompon’ny fahefana, ary ny vahoaka dia mianga avy aminao, amiko, amintsika tsirairay avy. Raha miaramiro isika,tanjona iray: Fiverenan’ny Filoha Ravalomanana, ary ny fioganan’i Rajoelina… dia handroso ny tolona, samy manao izay tandrifiny.
Manohana ny hevitrao tanteraka aho ry LAZALAZAO,mankasitraka e!!
hafatra sy torohevitra tsara ary TSY MITANILA, afa tsy ilay indro kely,
aza dia kianina MAFY loatra ilay fivavahana fa devoly anie no miady amintsika e!!!tsy laviko kosa anefa fa
tena hilaina ny HETSIKA MAFONJAFONJA KOKOA noho izao.
Olona tokoa izany marina ! mahereza fa tsy ho ela intsony io !
Tena hisaorana izay efa nanao fitoriana ara dalana an’domelina sy ny forongony!fa sao d’efa tokony ampiana tosika am fanalana azy ,sy ny famerenana haingaina ny PRM izao no imasoana?henoinoy fa ry foza efa misy miketrika zavatra am 7fevrier,ho eny Ambohitsirohitra miaraka am gros bras sy ny ambany tanana sy ny AV7,dia hiteny am Domelina hoe milatsaha.mila manomana zavatra betsaka ny zanak’i dada e>:(indrinda mba manao actions fa tsy réactions par rapport am zay ataon dry doma foana e!
Ka sahia ande hiara diaaaa,aza kanosa fa avia,Ravalomanana no hitondra antsika,ka mandresy no torimarika!!!!
Mety dia mety amintsika zany hevitry ny foza ,gros bras ,Av7 zany kà;aleo hanao fa zà maka azy @zany soapeta à!
Précédent Article précédent : HILARION RARISON : MANANJO HODY ETO NY FILOHA RAVALOMANANA MARC
Suivant Article suivant : CPS : Sanction maintenue contre les 109 HAT